Profesora Mamy Lalatiana “Voan’ny Covid-19 aho”
Nizara tao amin’ny pejiny tao amin’ny tambajotram-pifandraisana Facebook ny profesora Mamy Lalatiana Andriamanarivo omaly fa anisan’ny voan’ny otrik’aretina Coronavirus izy
ANDAPA Vehivavy 7 no hita faty tao anatin’ny 9 volana!
Nolazain’ny dokotera fa mila misotro rano be aho, satria maloto ny ao anaty.
Tena kamo misotro rano anefa aho, indrindra amin’izao andro mangatsiaka izao, ka sao mba manana torohevitra ianareo mba hampazoto ?
Dokotera SAINA Rambinintsoa Lavon’ny Covid-19
Misaona ireo mpiasan’ny OMS eto Madagasikara. Lavon’ny Coronavirus teto amintsika ny Dokotera Saina Isiraely Rambinintsoanomenjanahary. Dokotera mpiasan’ny OMS eto Madagasikara ny tenany ary misahana andraikitra ambony mikasika ny fitantanana ireo fandaharan’asa eo anivon’ny OMS eto Madagasikara,
Sakafo fety mafilotra fa tsy mandany vola
Manodidina ny 20.000Ar eo ny bitro iray. Betsaka no tsy zatra mihinana azy ity nefa rehefa voafehy ny mikarakara azy dia mafilotra ny fivoakany. Bitro iray ampy ho an’olona 6 eo ary azo hanina miaraka amin’ny ovy na vary izy, araka izay hitiavana azy.
Zazakely dia voan’ny “cancer” : fa maninona ?
Raha ny salanisa misy amin’izao fotoana dia ankizy 100 isan-taona no fantatra fa mararin’ny homamiadana ka tsaboina eo amin’ny HJRA manokana. Homamiadan’ny rà, maso, taolana, voa, tratra sns.
Alphonsine, vadin’i Zoto …maty tampoka!
Nodimandry ny alatsinainy teo, tamin’ny 1 ora maraina tao amin'ny hopitalibe Androva Mahajanga Itompokovavy Alphonsine vadin'i Zoto, ilay fianakaviana 5 mianaka nanao dia an-tongotra avy any Manakara ho any Antsiranana.
Menara, kaominina Ambahoabe, distrikan’i Soanierana-Ivongo. Tamin’ny fomba feno habibiana no nitrangan’ny famonoana raha ny angom-baovao. Sahabo ho 36 taona io ramatoa io. Disadisa teo amin’izy sy ny vadiny no nitarika ny famonoana azy. Raikitra aloha ny fizarana entana, izay tonga hatramin’ny fizarana tanim-boly. Rehefa tonga tany amin’ity toerana ity izy mivady ireto, izay alan-davanilina, dia raikitra indray ny ady, ka rehefa tsy nahazaka ilay rangahy, dia novelesiny tamin’ny hazo ny hatok’ilay ramatoa vadiny ary naleviny. Ireo mpiara-monina moa no nahatsikaritra voalohany ny tsy nahitana ilay ramatoa, tamin’ny fetin’ny faran’ny taona sy ny taom-baovao teo. Tamin’ny 30 desambra mantsy, raha ny nambaran’ilay rangahy, no nitrangan’ity famonoana ity. Nohazonina tao Ambahoabe, raha ny vaovao farany, moa ilay rangahy vadiny. Niaiky ny heloka vitany izy, ary vonona ny hitondra azy eny amin’ny mpitandro ny filaminana eny Soanierana Ivongo ny fianakaviany. Ny zomà 10 desambra teo ihany koa dia efa saika nisy fifanolanana teo amin’ireo havan’ilay ramatoa sy ny havan’ity rangahy namono ity ary ny sefom-pokontany. Ity farany mantsy dia rain’ilay nahavanon-doza. Nanafatra mantsy ny havan’ilay ramatoa fa tsy mbola tokony nalefa tany Ambahoabe ilay rangahy fa miandry ny fahatongavan’ireo fianakavian’ny vehivavy. Nanara-bady mantsy ity ramatoa ity fa mponina ao an-toerana. Efa niofo ihany koa ny nofon’ny razana izay heverina fa nodoran’ilay rangahy aloha vao naleviny. Andrasana moa ny tohin’ny raharaha.